HRC34 Statement on Agenda Item 6: Adoption of the report of UPR of Zimbabwe – The Permanent Mission of the Republic of Maldives to the United Nations and other International Organisations at Geneva
HRC34 Statement on Agenda Item 6: Adoption of the report of UPR of Zimbabwe
Delivered by Ms. Aishath Shahula First Secretary of Permanent Mission of the Republic of Maldives to the United Nations Office at Geneva
The Maldives warmly welcomes the delegation of Zimbabwe to this meeting. We thank the delegation for the update on the review and appreciate Zimbabwe’s meaningful engagement with the Working Group.
The Maldives appreciates the support of Zimbabwe on the three recommendations made by the Maldives. We are also greatly encouraged by the country’s efforts in furthering equitable economic and social development in the country.
Further, we note Zimbabwe’s recent ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the optional protocol, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, the Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict, and the Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography.
We wish the delegation of Zimbabwe success in the implementation of the recommendations set before it and we encourage the Government to continue its efforts toward promoting human rights in the country.